Ciidamada dowladda oo Al shabaab kala wareegay deegaanka Buur-weyn ee gobalka Hiiraan – Somali Top News
August 26, 2019 Somali Top News	0 Comments Ciidamada dowladda oo Al shabaab kala wareegay deegaanka Buur-weyn ee gobalka Hiiraan
Ciidamada dowlada Soomaaliya ayaa si buuxda ula wareegay degaanka Buur-weyn oo dhaca xadka kala qeybiya gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe oo muddo dheer ay ka talinayeen Al-shabaab.
Wararku waxaa ay sheegayaan in ciidamada dowladda Soomaaliya oo garabsanaya kuwa howlgalka midowga Africa AMISOM kala wareegeen degaankaas oo al-shabaab u ahaa mid muhiim u ah oo ay gaadiidka uga qaadi jireen canshuurta.
Ma jirin wax iska horimaad ah oo halkaas ka dhacay, iyadoo Al-shabaab ay isaga baxeen markii ay ka war heleen duulaanka kaga soo wajahnaa ciidamada dowladda oo halkaas markii tageen ka sameystay fariisimo cusub.
Lama oga halka ay tageen xoogagga Al-shabaab ee laga qabsaday degaanka Buur-weyn oo ah marin istaraatiiji ah u ah isku socodka gaadiidka isaga kala goosha gobollada Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya.
← Ciidamada Puntland oo howlgal gaar ah ka fulay Buuraha Goolis
Muxuu salka ku hayaa khilaafka cusub ee soo kala dhexgalay Hogaanka Ahlu-Sunna? →
Madaxweynihii Soomaaliya Sheekh Shariif oo xayiraad kadib Gurigiisa ku soo laabtay
Wasiirka Warfaafinta oo iska difaacay eedeynta Telefishinka Qaranka ee anshax xumada aheyd
April 15, 2020 April 15, 2020 Somali Top News 0
Amniga magaalada Kismaayo oo ciidan cusub lagu wareejiyo